Ny Sakafo Harivan’ny Tompo Tamin’ny 14 Nisana | Fiainan’i Jesosy
MATIO 26:21-29 MARKA 14:18-25 LIOKA 22:19-23 JAONA 13:18-30
NAMPAHAFANTARINA HOE MPAMADIKA I JODASY
NANOMBOKA NY FANKALAZANA NY FAHATSIAROVANA I JESOSY
Nampianatra ny mpianany hanetry tena i Jesosy, rehefa nanasa ny tongotr’izy ireo. Nihinana ny sakafon’ny Paska izy ireo avy eo, tamin’iny takariva iny. Toa taorian’izay i Jesosy no nanonona an’ity faminanian’i Davida ity: “Ilay olona tsara fihavanana tamiko, izay nitokisako, sy niara-nihinana ny mofoko tamiko, dia nanainga ny voditongony hamely ahy.” Hoy izy avy eo: “Hamadika ahy ny iray aminareo.”—Salamo 41:9; Jaona 13:18, 21.
Nifampijery ny apostoly ka samy nanontany hoe: “Izaho ve izany, Tompo ô?” I Jodasy Iskariota koa aza mba nanontany. Teo akaikin’i Jesosy i Jaona ka nasain’i Petera nanontany hoe iza izany. Nanakaiky an’i Jesosy àry i Jaona ka hoy izy: “Iza izany, Tompo ô?”—Matio 26:22; Jaona 13:25.
Namaly i Jesosy hoe: “Ilay homeko ny sombi-mofo atsoboko ao anaty vilia no izy.” Natsobony tao anaty vilia ny sombi-mofo avy eo ary nomeny an’i Jodasy, sady hoy izy: “Handeha ny Zanak’olona, araka ny voasoratra momba azy, nefa lozan’izay olona nampiasaina hamadihana ny Zanak’olona! Tsara kokoa ho an’izany olona izany raha tsy teraka akory.” (Jaona 13:26; Matio 26:24) Niditra tao amin’i Jodasy i Satana avy eo. Efa ratsy toetra i Jodasy nefa vao mainka nanaiky hanao ny sitrapon’ny Devoly ka lasa “zanaky ny fandringanana.”—Jaona 6:64, 70; 12:4; 17:12.
Hoy i Jesosy tamin’i Jodasy: “Ataovy haingana izay ataonao.” Tany amin’i Jodasy ny boatim-bola ka nihevitra ny apostoly hafa fa tokony hanao fanomezana ho an’ny mahantra izy, na te hilaza i Jesosy hoe: “Vidio izay ilaintsika amin’ny fety.” (Jaona 13:27-30) Nandeha nitady fomba hamadihana an’i Jesosy anefa i Jodasy.
Nisy zava-baovao natombok’i Jesosy tamin’io takariva nihinanana ny Paska io. Nandray mofo izy, nanao vavaka fisaorana, ary nanapaka ny mofo. Nomeny ny apostoly izany ary hoy izy: “Ity no vatako izay homena ho anareo. Ataovy hatrany izao ho fahatsiarovana ahy.” (Lioka 22:19) Nampitampitaina ilay mofo ary samy nihinana ny apostoly.
Noraisin’i Jesosy ny kaopy nisy divay avy eo ary nanao vavaka fisaorana izy. Nampitampitainy tamin’ny apostoly izany ary samy nisotro izy ireo. Hoy i Jesosy momba ilay kaopy: “Ity kaopy ity no fifanekena vaovao miorina amin’ny rako, izay halatsaka ho anareo.”—Lioka 22:20.
Nankalaza ny fahatsiarovana ny nahafatesany àry i Jesosy. Tokony hankalaza azy io ny mpanara-dia azy isaky ny 14 Nisana. Mampahatsiahy antsika izy io fa nanao zavatra i Jesosy sy ny Rainy, mba ho afaka amin’ny ota sy ny fahafatesana ireo manam-pinoana. Nanasongadina ny nanafahana ny Jiosy ny Paska, fa ny tena fanafahana an’ireo mino an’i Jesosy kosa no asongadina rehefa Fahatsiarovana.
Nilaza i Jesosy fa “halatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka” ny rany. Maro no ho voavela heloka, anisan’izany ny apostoly tsy mivadika sy ny mpianatra hafa tsy mivadika. Izy ireo no hiaraka amin’i Jesosy ao amin’ny Fanjakan’ny Rainy.—Matio 26:28, 29.
Inona no faminaniana noresahin’i Jesosy momba ny namany iray, ary ahoana no nanazavany an’ilay izy?
Inona no nasain’i Jesosy nataon’i Jodasy, nefa ahoana no nandraisan’ny apostoly hafa ny teniny?
Inona ilay fankalazana vaovao natombok’i Jesosy, ary inona no antony ankalazana azy io?
Hizara Hizara Ny Sakafo Harivan’ny Tompo